China Sugarcane Juicer Machinery Production Line စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
ကြံဖျော်စက် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း/စက်ရုံ
တစ်နှစ်လျှင် 25 Set/Sets အလိုအလျောက်ဖျော်ရည်ဖျော်စက် ထုတ်ယူသည့်စက်
တည်ငြိမ်သော သစ်သားအထုပ်သည် စက်ကို ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။အနာကို ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စက်ကို စိုစွတ်မှုနှင့် ချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်သော ပက်ကေ့ခ်ျသည် ချောမွေ့သော အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ကူညီပေးသည်။အရွယ်အစားကြီးမားသောစက်ကို အထုပ်မပါဘဲ ကွန်တိန်နာတွင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ
1. တစ်စည်းတွင် ထုတ်ကုန်လက်ခံသည့်တိုင်ကီ၊ အထူးအပူပေးထားသောရေတိုင်ကီ၊ ပန့်များ၊ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုစစ်ထုတ်စက်၊ tubular superheated water generate system၊ tube in tube heat exchanger၊ PLC control system၊ Control cabinet၊ steam inlet system၊ valves နှင့် sensors စသည်တို့ပါဝင်သည်။
2. အီတလီနည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပြီး ယူရိုစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
3. ကောင်းမွန်သောအပူလဲလှယ်ဧရိယာ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။
1. အီတလီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ၊ ခေါင်းခွဲနှင့်ခေါင်းနှစ်လုံး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လာခြင်းကိုလျှော့ချပါ။
2. ပိုးသတ်ရန် ရေနွေးငွေ့ထိုးဆေးကို အသုံးပြု၍ ပိုးမွှားအခြေအနေသို့ ဖြည့်သွင်းရန် သေချာစေရန်၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းသည် အခန်းအပူချိန်တွင် နှစ်ဆတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
3. ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဒုတိယညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန် turntable lifting mode ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါတယ်-
မိုဘိုင်း/ wechat: +8613681836263
တစ်နှစ်။ဝတ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများမှလွဲ၍ အာမခံအတွင်း ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အခမဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်။ဤအာမခံချက်သည် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှုများကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းများကို အကျုံးမဝင်ပါ။ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် အခြားအထောက်အထားများ ပေးဆောင်ပြီးနောက် အစားထိုးလဲလှယ်မှုကို သင့်ထံ ပေးပို့ပါမည်။
2. ရောင်းချခြင်းမပြုမီ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ပေးနိုင်သနည်း။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စွမ်းရည်အလိုက် အသင့်တော်ဆုံးစက်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သင်၏အလုပ်ရုံအရွယ်အစားကိုရရှိပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အလုပ်ရုံစက်အပြင်အဆင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသည်။တတိယအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်းချခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ပါသည်။
3. ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်မည်ကဲ့သို့အာမခံနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်အရ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းတို့ကို လမ်းညွှန်ရန် အင်ဂျင်နီယာများကို စေလွှတ်နိုင်သည်။
ယခင်- အလိုအလျောက် သံမဏိ နာနတ်သီးဖျော်ရည် ထုတ်ယူသည့် စက်များ
နောက်တစ်ခု: Hot Sale 100% ဖရဲသီးစစ်စစ် ဖျော်ရည် လိုင်း
လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ဖြည့်စက် Mango Juice ထုတ်ကုန်...
စက်မှုစတော်ဘာရီဖျော်ရည် ပျော့ဖတ် ထုတ်ယူခြင်း Mach...
အလိုအလျောက် ဘလူးဘယ်ရီဖျော်ရည်ကို အာရုံစူးစိုက်မှု ပြီးအောင်...
100% ဖရဲသီးစစ်စစ် ဖျော်ရည် အရောင်းအ၀ယ်...